Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အင်တာဗျူး
“မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူ အာဏာရှိတယ်ဆိုတာ... အမေရိကန်က သိတယ်”	ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၀ မိနစ်	ဖနိဒါ	ရာစုနှစ် တဝက်ခန့် နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အဆက်ပြတ်ခဲ့ရသည့် မြန်မာနှင့် အမေရိကန်တို့ ဆက်ဆံရေးမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ...
ဦးသိန်းစိန်နှင့် အိုဘားမား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည့်အပေါ် သုံးသပ်ချက်အမြင်အချို့	သောကြာနေ့၊ မေလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၃ မိနစ်	အေးမြင့်စန်း	(အင်တာဗျူး) သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုများဖြင့် မြန်မာ့ နပန်းသမားတို့ သတ်ပုတ်စွမ်းရည် တက်လာမည်	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၄ မိနစ်	သီဟဇော်	ဒီဇင်္ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ (SEA Games) တွင် အားကစားနည်း ၃၃ ခု ...
“ပွဲဖျက်ပြီးတော့ ကယ်တင်ရှင် ဝင်လုပ်မှာလား”	သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၀၂ မိနစ်	ခိုင်ခိုင်	မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ရွှေဆိုင်တဆိုင်တွင် အငြင်းပွားရာမှ စတင်၍ အဓိကရုဏ်း တခုအဖြစ် ကျယ်ပြန့်သွားခဲ့ရသည့် မိထ္ထီလာ ...
လမ်းလျှောက်တာ လှရုံနဲ့ မော်ဒယ်မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ တင်မိုးလွင်	အင်္ဂါနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၇ မိနစ်	ပန်းမြတ်ဇော်	တစ်ခေတ် တစ်ချိန်က မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်လောက် လွယ်လွယ်ကူကူ မဟုတ်ဘဲ ခက်ခဲတဲ့ လမ်းကြောင်း တစ်ခု ...
ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်တွေ အိမ်တိုင်ရာရောက် အလကားပေးမယ်	အင်္ဂါနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၈ မိနစ်	တင်ဇာအောင်	ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီက ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူထားရာ Red Link ကုမ္ပဏီလည်း လျှောက်ထားလိုက်ပြီး ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး “ဘာမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ မရှိပါဘူး” ဟု ဦးဌေးဦး ပြော	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၉ မိနစ်	တင်ဇာအောင်	ယခင် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ လက်ရှိအခင်းအကျင်း ရောက်အောင် ဖန်တီး၍ လွှဲအပ်သွားခဲ့ပြီးနောက် မည်သည့်စွက်ဖက်မှုမျှ ...
“ဈေးကွက် သေးတာကို ကျနော် မကြည့်ပါဘူး” ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၄ မိနစ်	တင်ဇာအောင်	ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးတဦး ပိုင်ဆိုင်သော HTC မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် HTC Smart Phone များ တရားဝင် ဖြန့်ချီခွင့်ကို ...
“ကချင်ကို ဒီလောက်တိုက်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာစိတ်မကျေနပ်တာ ရှိလဲ”	အင်္ဂါနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၄ မိနစ်	ဖနိဒါ	၁၉၄၇ ခုနှစ်က ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဟိုဝါး ဒူဝါ ခွန်ဖုန်း Howa Duwa M.Hkun Hpung ၏ သား ဟိုဝါး ဒူဝါဇော်ဂမ် Howa Duwa Zau Gam အား ...
“လူထုဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်တဲ့ သတ္တိတွေနဲ့ ပိုင်းဖြတ်ချက်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်” တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၈ မိနစ်	ကိုပေါက်	နှစ်တနှစ်သည် ခေတ်တခေတ်၏ အစိတ်အပိုင်းလေး တခုမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း အရေးကြီးသော အဖြစ်အပျက်များသည် နှစ်တနှစ်တွင် များမြောင်လှတတ် « ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 28	Mizzima TV
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အိန္ဒိယ လေ့လာရေးခရီးမြန်မာ့အရေး Bertil Lintner ဟောပြောချက်ကချင်စစ်ပွဲအရေး ဒေလီရှိ မြန်မာများ ဆန္ဒပြသီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုံကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီများဖြင်�...	ကြော်ငြာ
ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုများဖြင့် မြန်မာ့ နပန်းသမားတို့ သတ်ပုတ်စွမ်းရည် တက်လာမည်
We have 94 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved